Momba anay | Shijiazhuang Lemandou Chemicals Co., Ltd.
Tongasoa eto amin'ny Lemandou Chemicals
Ankasitrahana tokoa ny sainao sy ny fanohananao!
Lemandou Chemicals natsangana tamin'ny taona 2008, any Shijiazhuang, renivohitry ny faritanin'i Hebei. Manodidina ny 300km avy any Beijing dia mila 1.5h amin'ny lamasinina haingam-pandeha. 300km eo ho eo ihany koa miala ny seranan'i Tianjin, izay seranana lehibe indrindra any avaratr'i China. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny Lemandou Chemicals dia miasa mafy, mandroso ary mitazona fitoniana. Maneran-tany ny mpanjifanay. Mitohy ny fitomboana maharitra sy ny rap amin'ny refin'ny varotra. Izy io dia iray amin'ireo orinasa malaza any amin'ny faritra.
Araka ny drafitra stratejika fampandrosoana ny Zezika, PGR ary Pesticides amin'ny lafiny iray, ny Lemandou Chemicals dia mampiroborobo ny tsena anatiny ary mitazona ny tsena fanondranana nentim-paharazana. Nanangana fiaraha-miasa stratejika marin-toerana amin'ireo orinasa be zezika marobe izahay na an-trano na any ivelany. Amin'ny lafiny iray, dia manokana ezaka bebe kokoa amin'ny R&D sy ny fanaingoana anay izahay. Izahay dia manolo-tena ho orinasa mpamokatra zezika, PGR ary fanafody famonoana bibikely manana ny fifaninanana eo amin'ny tsena sy ny fitaomana ny marika manerantany. Mifantoka amin'ny vokatra hafarana zezika, PGR sy fanafody famonoana bibikely ary R&D vokatra mihoatra ny 12 taona izahay. Traikefa manankarena voangona eo amin'ny tsena sy serivisy. Ary namorona lamina fandidiana mahazatra sy ny rafi-serivisy ho an'ny mpanjifa.
Manana traikefa an-taonany maro amin'ny zezika sy ny sehatry ny fiarovana ny zavamaniry izahay
Manana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo mpandefa mpitatitra entana matihanina sy orinasam-pitaterana entana mba hahazoana antoka fa mahatratra ny mpanjifa haingana sy azo antoka ny entana
Ny mpanjifa voalohany, mifanaraka amin'ny fampisehoana, ny asan'ny ekipa faly, ny fanavaozana
Nametraka fifandraisana ara-barotra am-pirahalahiana amin'ireo mpanjifa an-jatony amin'ny firenena sy faritra dimam-polo mahery izahay. Miaraka amin'ny fampivoarana ny orinasa, ekipa iray tanora, mavitrika ary mavitrika no naorina tamin'ny taona 2015. Ny ekipanay vaovao dia mampanantena ny hanome ny mpanjifa vokatra tsara kalitao indrindra amin'ny vidiny mirary sy serivisy mahafa-po. Ny fampandrosoana ny Lemandou Chemicals dia tarihin'ny fanohanan'ny mpanjifany. . Ny fandrosoana tratra dia mifandray akaiky amin'ny fanampiana sy ny fikarakaran'ny namany. Hanolo-tena hanolotra serivisy tsy an-kijanona ho an'ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao izahay, tarihin'ny sanda fototra - "Mpanjifa Voalohany, Miorina amin'ny fampisehoana, Miasa amin'ny ekipa faly, fanavaozana".
Vonona ny hahafantatra bebe kokoa momba antsika?
Raisinay tsara ireo namana eran'izao tontolo izao mba hiara-hiasa aminay amin'ny lafiny rehetra sy amin'ny ambaratonga rehetra ho amin'ny ho avy miroborobo!